David De Gea oo qalinka ku duugaya heshiis cusub lkn ka xanaajin doonta xiddigaha kooxda Man United %
David De Gea oo qalinka ku duugaya heshiis cusub lkn ka xanaajin doonta xiddigaha kooxda Man United
Kooxda Man United ayaa ku dhaw in ay heshiis cusub ka saxiixato Goolhayaha David De Gea kadib wadahadalo muddo dheer socday iyaga oo qaaday talaabo ka xanaajin doonta Paul Pogba iyo waliba xiddigaha kale ee kooxda.
Man United ayaa lagu soo waramayaa in ay ogolaatay in ay Meesha ka saarto heshiiska 25% ee hoosta loogu dhigay mushaharka xiddigaha Man United si uu De Gea qalinka ugu duugo heshiis cusub.
De Gea ayaa la rumaysan yahay in uu qalinka ku duugay heshiis 4 sano ah iyo hal sano oo dookha ah oo uu ku joogi doono kooxda Man United.
Arintan ayaa soo afjaraysa bilo la hadal hayay mustaqbalka goolhayaha marka loo eego in uu heshiiskiisu dhici doono dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Goolhayaha ayaa la sheegayaa in uu doonayay lacag badan xilli uu De Gea haatan kooxda mushahar uga qaato lacag dhan 250 kun oo Gini todobaadkii.
Wargayska Time ayaa sheegaya in uu De Gea mushahar ahaan u qaadan doono lacag ka badan xiddigaha ay isku kooxda yihiin sabab la xiriir in heshiiskiisa laga saaray shardigii lacag hoos u dhigista ee ay kooxdu ku xidhay xiddigaha kooxda markii ay ka hadheen champions league.
Wargayska ayaa sheegaya in mushaharka xiddigaha kale ee kooxda laga jari doono 25% halka uu De Gea si buuxda u qaadan doono mushaharkiisa oo aan waxba laga jarin marka uu qalinka ku duugo heshiiska cusub.
Shaki la’aan talaabadaas ayaa ka xanaajin doonta xiddigaha kooxda Man United ee uu ugu horeeyo Paul Pogba oo markii horeba doonayay in uu isaga tago kooxda suuqii xagaaga.
11-kii Xiddig Ee Todobaadkan Ugu Fiicnaa Horyaalka Premier League
Farxadii Ugu Weyneyd Oo Usoo Yeedhay Jamaahiirta Barcelona, Lionel Messi Oo Tababarkii Maanta Qaatay & Fursadiisa Kulanka Xoogan Ee Dortmund